GravityView साथ WordPress को लागी एक अनलाइन निर्देशिका बनाउनुहोस् Martech Zone
यदि तपाईं हाम्रो समुदायको केही समयको लागि रहनुभयो भने, तपाईंलाई थाहा छ हामी कति प्रेम गर्छौं फारम निर्माण र डाटा स collection्कलनको लागि गुरुत्व फारामहरू WordPress मा। यो केवल एक शानदार प्लेटफर्म हो। मैले भर्खरै एकीकृत गरें गुरुत्वाकर्षण फारम संग Hubspot एक ग्राहकको लागि र यो राम्रोसँग काम गर्दछ।
म गुरुत्वाकर्षण फारामहरू मन पराउनुको मुख्य कारण यो हो कि यसले वास्तवमा डाटा स्थानीय रूपमा बचत गरिरहेको छ। सबैको लागि एकीकरण गुरुत्वाकर्षण फारम त्यस पछि डाटा तेस्रो पार्टी प्रणालीमा पास हुनेछ। यो मेरो ग्राहकहरूको लागि आवाश्यक छ ... मलाई डाटा हराउने चाहँदैन यदि तेस्रो-पार्टी एपीआई तल गयो वा त्यहाँ वैधताको समस्याको केही अन्य प्रकार छ। बजारमा प्राय जसो साधारण सम्पर्क फारामहरू त्यसो गर्दैनन्।
थप रूपमा, ReCaptcha र गुगल नक्सा जस्ता उपकरणहरूको साथ बक्स बाहिर काम गर्दछ, यो केवल एक ठोस प्रणाली हो। मैले धेरै बर्ष पहिले असीमित साइट इजाजतपत्र खरीद गरें र तपाईले कल्पना गर्न सक्ने प्रत्येक सम्भाव्य समाधानको लागि यसलाई प्रयोग गर्दैछु।
ग्रेविटी फार्म डाटा कसरी प्रदर्शन गर्ने?
गुरुत्वाकर्षण फाराम डेटा बचत गर्नका लागि एक शानदार उपकरण हो ... तर के हुन्छ यदि तपाईं वास्तवमै आफ्नो साइटमा त्यो डाटा प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने? मैले ग्राहकहरूको लागि केहि अनलाईन क्यालकुलेटरहरू विकास गरेको छु जसले यो गर्‍यो, र यो साधारण कार्य थिएन। मैले व्यवस्थापकमा आन्तरिक डाटा प्रदर्शन गर्ने कार्यप्रवाह उत्पादन पनि विकास गरें ... यो एकदम उपकार्य थियो।
ठीक छ, स्वागत छ गुरुत्वाकर्षण दृश्य! GravityView एक WordPress प्लगइन हो कि तपाईं आफ्नो गुरुत्वाकर्षण फाराम डाटा प्रकाशित गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो शानदार छ - र यसले ग्रेभिटी फार्मको एक आशीर्वादलाई एक राम्रो समाधानको रूपमा पनि प्राप्त गरेको छ।
एक अनलाइन निर्देशिका निर्माण केवल सरल भयो! जानकारी क्याप्चर गर्न एक फारम निर्माण गर्नुहोस्, त्यसपछि नक्शा र निर्देशिका सूची निर्माण गर्नुहोस् जुन डाटा प्रदर्शन गर्दछ ... कोडको एकल लाइन नलगाईकन!
ग्र्याविटीभ्यूले असीमित दृश्य निर्माण गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ, उनीहरू लाइभ हुनु अघि प्रविष्टिहरू स्वीकार र अस्वीकार गर्दछन्, र फ्रन्ट-एन्डबाट ती प्रविष्टिहरूको सम्पादन सक्षम गर्दछ। वर्डप्रेस, ग्रेविटी फार्महरू, र गुरुत्वाकर्षण दृश्य जोड्नुहोस्, र तपाईं सँग एक पूर्ण सक्षम सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली छ कि डाटा स collect्कलन र प्रदर्शन गर्न सक्दछ तथापि तपाईंलाई चाहानुहुन्छ।
डाटा सूची, तालिकाहरू, डाटा तालिकाहरू, वा नक्सामा पनि हेर्न सकिन्छ।
ग्रेविटीभ्युले कसरी काम गर्छ?
फारम सिर्जना गर्नुहोस् - पहिले यससँग फारम सिर्जना गर्नुहोस् गुरुत्व फार्म, WordPress का लागि सबै भन्दा राम्रो फार्म प्लगइन। फारममा क्षेत्रहरू थप्नुहोस् र यसलाई तपाईंको वेबसाइटमा इम्बेड गर्नुहोस्।
डाटा भेला गर्नुहोस् - त्यसो भए फारम भर्नुहोस्। तपाईंको डाटा मा भण्डारण हुनेछ पछाडि अन्त तपाईको वेबसाइट को, गुरुत्व फार्म प्लगइन भित्र।
तपाइँको सजावट डिजाइन गर्नुहोस् - ड्र्याग एण्ड ड्रप इन्टरफेस प्रयोग गरी तपाईको उत्तम लेआउट सिर्जना गर्नुहोस्। कुन क्षेत्रहरू समावेश गर्ने र तिनीहरूलाई कहाँ प्रदर्शन गर्ने छनौट गर्नुहोस्। कुनै कोडिंग आवश्यक छैन!
यसलाई तपाईंको साइटमा थप्नुहोस् -
अन्तमा, इम्बेड गर्नुहोस् र तपाईंको वेबसाइटको फ्रन्ट एन्डमा तपाईंको डाटा प्रदर्शन गर्नुहोस्। तपाईं हेर्न वा सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ प्रविष्टिहरू बिना WordPress WordPress मेनुमा जानुहोस्।
यो त्यो सजिलो छ!
GravityView डाउनलोड गर्नुहोस्
अस्वीकरण: मैले यसको लागि मेरो सम्बद्ध लिंकहरू प्रयोग गरिरहेको छु गुरुत्वाकर्षण फारम र गुरुत्वाकर्षण दृश्य यस लेखमा।
टैग: संबद्धडाटा स collect्कलन गर्नुहोस्डाटा तालिकाgoogle mapsगुरुत्वाकर्षण रूपहरूगुरुत्वाकर्षणहबस्पटअनलाइन निर्देशिकाWordPress नक्शा
लिड्स क्याप्चर गर्न वर्डप्रेस र ग्रेविटी फार्महरू प्रयोग गर्दै
वूकोमर्स ईमेल मार्केटिंगका लागि उत्तम उपकरणहरू